Nanomboka Ny Fitokonany “Maina” Tsy Hihinan-kanina Ilay Bilaogera Iraniana Voafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2012 1:50 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Italiano, Français, বাংলা, Ελληνικά, Español, Aymara, English
Manana endrika vaovao indray ilay tantara mampalahelon'ireo bilaogera Iraniana tato ho ato : Hossein Ronaghi Maleki, ilay blaogera nanefa sazy 15-taona an-tranomaizina. Milaza ny rainy fa fijaliana ho azy ny fonja nohon’ ny voany marefo. Nodidiana in-dimy ilay bilaogera nefa isaky ny vita ny fandidiana azy dia naverina any am-ponja hatrany izy, fonja izay tsy manana fitaovana hitsaboana azy akory, sakafo mety aminy, ary tsy manana manampahaizana manokana momba ny voa.
Nanomboka ny fitokonany tsy hisakafo i Hossein ny 19 May 2012 nohon'ny antony tsotra : mba hanana zo hijanona any amin'ny tobi-mpitsaboana aorian'ny fandidiana sy tsy averina indray any am-ponja. Niharatsy ny toe-pahasalamany, ary nalefa matetika tany amin'ny hopitaly izy. Herana, vohikala iray mpiaro zon'olombelona, dia nanambara [fa] ny alarobia 6 jona fa nanomboka nitokona tsy hihinana sakafo “maina” hatrany amin'ny hopitaly i Hossein, izay midika fa tsy misotro rano intsony koa izy.
Fanambaran’ i Adam Evolution [fa] mikasika an’ i Hossein Ronaghi Maleki :
Tsy mpihira izy, tsy mpilalao baolina kitra, tsy mbola niboridana ary tsy mpilalao sarimihetsika. Niady ho amin'ny fahalalahana ao amin'ny aterineto fotsiny izy. 27 taona, voaheloka 15 taona an-tranomaizina, ary efa nanefa folo volana tao amin'ny toerana mitokana, efa nodidiana in-dimy izy ary ary tsy avotra tamin'izany ny voany iray.
Faryade3rang nanoratra hoe [fa]:
Nilaza ny renin'i Hossein fa voahitsakitsaka im-betsaka ny zon'ny zanany lahy fony izy tany am-ponja ary tsy nekena ny hahazoany mpisolovava. Mitomany ny reniny rehefa miresaka momba ilay zanany any am-ponja.
Nanao antso avo hitokonanan tsy hihinan-kanina i Nazanin [fa] ny 11 Jona izao ho fanohanana an'i Hossein Ronagh Maleki. Pejy Facebook iray no noforonina mba hanairana ny sain'ny olona mikasika ny raharahany sy ilay fitokonana tsy hihinan-kanina.
Tamin'ny taona lasa, andiana sary maro no nozaraina tao amin'ny YouTube mba handrisihana ny olona hanohana ity bilaogera ity :
Tamin'ny 18 Martsa 2009 i Omid Reza Mir Sayafi, no blaogera Iraniana maty voalohany tany am-ponjan'i Tehran. Andao hanentana, hivavaka ary hanantena fa tsy hiseho intsony izany zava-dratsy izany.